"Fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin’izany dia aza manahy ny amin’ny ampitso ianareo."Matio 6:32-34
Fitondram-panjakana vaovao, fampanantenana vaovao, ary tsy ho ela… dia fahadisoam-panantenana vaovao: impiry moa no niverina izany toe-javatra izany! Tokony hionona amin’izany ve?
Azonao atao ny manana «Voafidy» Iray, Izay tsy hisy toa Azy, ho tokana, mandritra ny fiainanao! Nanome teny fampanantenana Izy, efa notanterahiny, mbola tazoniny ankehitriny, ary hotanany ho anao amin’ny hoavy. Tsy misy sakana tsy hainy ravàna: efa nomena Azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany (Matio 28:18). Izy tsy mampanantena anao hoe hiaina tsy misy olana, fa kosa hiaina, na inona na inona hitranga, matoky Olona tia anao, Izay mahafantatra ny ilainao ary mahafehy ny zava-drehetra.
Misy sarany aloa ve, na fepetra maneritery, na tatitra tsy maintsy atao? Tsia, fa maimaimpoana ny zavatra rehetra, omena tsy iandrasana tambiny; ary zavatra tsy heverina hisy mihitsy izany, amin’izao fiarahamonina baikoin’ny vola sy ady seza izao. Ny sarany? efa noefainy. Noefain’Ilay Zanaka Lahitokan’Andriamanitra, Jesosy Kristy, tonga tety an-tany, nolavina, novonoina mba hamonjy antsika amin’ny fahotantsika… Izany no tena porofon’ny fitiavana tsy manam-petra omen’Andriamanitra antsika.
Mahafinaritra loatra izany! hoy angamba ianao. Ahoana no hahazoana mifidy mpitari-dalana tsy hita maso, ambarana boky tsy voavaky akory satria tsy misy fotoana, na voavaky ihany fa tsy ho takatra akory? Ahoana no hinoana ireo teny fampanantenana ireo?
Ary raha mba manaiky tokoa moa ianao, ny hino ireo teny ireo, hatoky an’i Jesosy Kristy, Izay miteny aminao hoe: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana” (Jaona 14:6)… Tsy mbola nisy olona nanenina satria niroso tamin’izany dingam-pinoana izany. Ianao koa, tsy hanenina ianao.